Xukun Dil ah oo lagu Fuliyay Cabdulqaadir Faarx Dhaqane
HomeWararka MaantaXukun Dil ah oo lagu Fuliyay Cabdulqaadir Faarx Dhaqane
Maxkamadda dajajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida qeybta 27aad ayaa saaka xukun dil ah ku fulisay askari katirsanaa Ciidamada milatariga Soomaaliya, kaas oo qof shacab ah horey ugu dilay degmada Belad Xaawo.
Cabdiqaadir Faarax dhaqane (Nuune ) oo katirsanaa ciidanka milatariga ayaa magaalada Belad Xaawo dil bareer ah horey ugu heestay Marxuum Mowliid Baashe Cumar oo ahaa makaanik baabuurta sameeya.
Fagaaraha toogashada saaka ka dhacday ayaa waxaa ku sugnaa Saraakiisha Maxkamadda Ciidamada qeybta 27aad, Ehellada Askariga la toogtay & Ehelada qofkii uu horay u dilay iyo dadweyne kale oo u soo daawasho tegay.
Xeer ilaaliye kuxigeenka Maxkamadda Ciidamada qeybta 27aad Gaashaanle Maxamed Cabduqaadir Maxamed ayaa sheegay in Cabdiqaadir Faarax dhaqane (Nuune ) lagu helay in uu dilka ka dambeeyay, isla markaana saakay xukunkii horay loogu riday lagu fuliyay.
Fagaare kuyaala degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa shalay sidan oo kale xukun dil ah lagula fuliyay askari katirsanaa ciidanka daraawiiishta JUbbaland kaas oo isna nin bajaajle ahaa horey ugu dilay gudaha degmada Luuq.
Madaxweyne Qoor Qoor oo Booqday Dhaawaca Xildhibaan kusoo Dhaawacmay Degmada Guriceel